ညီမလေးတွေးဖို့ အတွေးလက်ဆောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ညီမလေးတွေးဖို့ အတွေးလက်ဆောင်
Posted by naywoon ni on Feb 25, 2011 in News | 19 comments
ညီမလေးရေ……… ညီမလေး ပြောတဲ့ ဆာဖာရီလား.. ဘာလား ။ အဲဒါဖွင့်ပွဲလုပ်တာ သိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အားမကျပါဘူး။ အားလည်းမပေးချင်ပါဘူး။ ခုလိုအချိန်မျိုးမှာ တို့ဆီမှာ ဒါကြီး(ဆာဖာရီ ဥယျာဉ်ကြီး)ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ၀မ်းလည်းမသာနိုင်ပါဘူး။ ဂုဏ်လည်းမယူချင်ဘူးလေ။ တစ်ကယ်တမ်း လိုအပ်နေတဲ့ အရာမှမဟုတ်တာ။ တစ်ကယ်တမ်းလိုအပ်နေတာက ခုထိ ကမ္ဘာမပြားသေးတဲ့ လူမွဲတွေ အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ လူငယ်လေးတွေအတွက် ခက်ရာခဲဆစ် သင်ကြားနေရတဲ့ နည်းပညာတွေ လွယ်လွယ်ကူကူ အခမဲ့/အခမဲ့နည်းပါး သင်နိုင်ခွင့်တွေ ။ ဒါတွေလိုအပ်နေချိန်မှာ…..။ ပြီးပြည့်စုံပြီးသား လက်တစ်ဆုတ်စာလောက်ရှိတဲ့ သူတွေ အပမ်းဖြေဖို့ ဥယျာဉ်တွေ မလိုချင် မလိုအပ်သေးဘူးလို့ထင်တယ်လေ။ တစ်ကယ်လို့များပေါ့လေ… ။ ခုညီမလေးပြောတဲ့ ဆာဖာရီ ဥယျာဉ်ကြီး လုပ်မဲ့အစား ကွန်ပြူတာ အခြေခံကို အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာ ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပြဌာန်းပြီး စနစ်တစ်ကျသင်ကြားလို့။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို အောင်လက်မှတ်တွေထုတ်ပေးလို့ဆိုရင်……..။ ဒါကို ကြိုဆိုရမှာ။ ဒီလက်မှတ်ကိုင်ပြီး အပြင်မှာအလုပ်တန်းဝင်လို့ရပြီလေ။ ခုတော့ အပြင်မှာ ငွေလေးငါးသေားင်း ကုန်မှ သင်တန်းနား ကပ်လို့ရတာ။ ကျောင်းတွေမှာ အခမဲ့ သင်ပေးမယ်ဆိုရင်…….။ ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။ ဒါညိမလေးတွေးဖို့ ဥပမာပြောပြတာပါ။ ခုတော့ ….အဲဒိဥယျာဉ်ကြီးက ကီလိုမီတာ 200လောက်ကျယ်တယ်ဆို။ တစ်စတုရမ်း ကီလိုမီတာကို လယ်ဧက 360 လောက်ရှိတယ်။ အဲဒိနေရာဟာ မြေလွတ်မြေရိုင်း ဟုတ်ပါလေစ။ မဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့ လယ်သမားတွေ ယာသမားတွေ ရဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဥယျာဉ်ထဲမှာ ဘယ်သူကြည်နူးရဲသလဲ။ ပုဂံ ခောတ်က ကျိန်စာထက်ဆိုးသွားလိမ့်မယ်။ ဒီမြေဧက ပေါင်းများစွာမှာ လူဘယ်လောက်ရဲ့ ထမင်းအိုးတွေ ရိုက်ခွဲပစ်ခဲ့ပြီလဲ? တွေးကြည့်ရအောင်။
ညီမလေးတွေးဖို့ ချည်လုံးတစ်လုံးရဲ့ အစ လေးဆွဲထုတ်ပြတာပါ ။ ဆက်တွေးကြည့်ပေါ့ နော် ။
လယ်ဧကပေါင်း (၈၂၀၀၀)မှတစ်ဧက နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ စပါးအထွက်နှူန်း တင်း ၄၀ = ၃၂၈၀၀၀၀ တင်း နှစ်စဉ်ယုတ်လျော့မသွားပေဘူးလား? ပြည်သူပေါင်းမည်မျှ ၀လင်စွာ စားသောက်နိုင်အံ့သနည်း.. ပြည်သူများမျက်ရည်စက်တွေ အဘယ်မျှ ရင်းနှီးခဲ့ရသနည်း..
စတုရန်းကီလိုမီတာ ၂၀၀ ကျော်ကျယ်ဝန်းသော ဆာဖာရီဥယျာဉ်ကြီးရှိလာခြင်းကြောင့် မြန်မာပြည်သူအများ animal အမျိုးအနွယ်များနှင့်ရင်းနှီးခင်မင်စွာ ထိတွေ့ခွင့်ရလာခြင်း
ဟောဗျာ…. ချည်လုံးက ချည်စလေးကိုဆွဲထုတ်နေရင်း ချည်ခင် ထုံးသွားပြန်ပါရော့လား
ရွာသားတွေလည်း ကျန်းမာ ရွင်လန်းပါစေ။
မျက်ရည်ကျနေမဲ့ သူတွေ ရှိမလား ဆိုတဲ့ အတွေးကတော့ တကယ် ၀င်သွားပြီ။
ဟုတ်လိုက်လေ ကိုနေ၀န်းနီရယ် သိပ်မှန်တာပေါ့ဗျာ..
အခြေခံကျောင်းတွေမှာ ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်ကို ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်ကောင်းပေါ့ဗျာ..
ကွန်ပျူတာ ဆရာ။ဆရာမ မရှိရင် ပြောကြစမ်းပါ ကူညီသင်ကြားပေးမယ့်သူ အများကြီးပါ။
>နေပြည်တော် တည်ဆောက်မှု တရက် ကျပ်သန်းလေးထောင် ခန့်သုံး
>“လွှတ်တော်ဆို တကယ့် ခမ်းခမ်းနားနား ဆောက်ထားတာ။ လွှတ်တော်မှာ သုံးတဲ့ ကျိုင်းဆိုတာတောင် ရွှေ ၆ ပိသာလောက်ရှိတယ်။ ကျန်တဲ့နေရာတွေကလည်း ရွှေအစစ်တို့၊ ကျောက်သံပတ္တမြားတွေနဲ့ အလှဆင် ထားတာတွေကော၊ မြန်မာမှုလက်ရာတွေဆိုလည်း တကယ့် ခမ်းခမ်းနားနားဆိုတော့ ကုန်တာပေါ့”ဟု ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာ တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက ဆက်လက်၍“အစိုးရပိုင်းက နောက်အစိုးရကို အာဏာမလွှဲခင် အမြန်ပြီးစေချင်ပုံရတယ်။ နောက်အစိုးရ လက်ထက်မှာ ရသုံး မှန်းခြေတို့ ၊ ဘတ်ဂျက် စာရင်းတို့ တင်ပြရမယ်ဆိုတော့ အခုအချိန်မှာ ပိုက်ဆံ သုံးလို့ရသလောက် သုံးမယ်ဆိုတဲ့ သဘော လားမသိပါဘူး”ဟုလည်း ဆိုသည်။
ထုတ်ပေးငွေများအနက် လွှတ်တော်တည်ဆောက်နေသော ACE ကုမ္ပဏီနှင့် အေ၀မ်း ကုမ္ပဏီတို့က အများဆုံး ထုတ်ယူ ရနေကြောင်းလည်း အထက်ပါ စည်ပင်သာယာ အရာရှိက ပြောသည်။
“ထုတ်တာကတော့ ACE က အများဆုံးပဲ။ လွှတ်တော်တို့ သမ္မ အိမ်တော်၊ ဒု သမ္မတ အိမ်တော်တွေက အချောကိုင်နေလို့ ပိုကုန်တယ်လို့ ပြောပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ အသုံးစရိတ်များကို ရန်ကုန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တ၀န်းရှိ နိုင်ငံပိုင် အဆောက်အအုံများ လေလံပစ်ရာမှ ရငွေများ၊ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ ရောင်းရငွေများ၊ ကျောက်မျက်ရောင်းရငွေများမှ သုံးစွဲနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသူများက ပြောသည်။
ဖြစ်နေတာလေးတွေပါ။ ဖြစ်သင့်တာလေးတွေ ဆက်ဆွေးနွေးကြပါဦး။
မြန်မာပြည်တလွှား ပြည်သူတွေရဲ့ မျက်ရည်တွေ၊ ချွေးတွေ၊ သွေးတွေကတော့ စစ်အစိုးရတက်လာ ကထဲက မြစ်ချောင်းပေါက်နေခဲ့ပြီ။
နန်းမြတ်လေးကို ကြောင်ကြီးကွန်ကလူတူပြာ သင်တန်းကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး အဖြစ်ခန့်လိုက်ပြီ။ လခက၁၅၀၀ စရိတ်ငြိမ်း။ နန်းမြတ်ပင်ပန်းမှာစိုးလို့ သင်တန်းသားဦးရေကို တဦးပဲထားမယ်၊ သူ့နာမည်က ကိုကြောင်။ သဘောတူရင် သင်တန်းချက်ချင်းစကြစို့နော်။
ဦးကြောင်ကြီးနော် ပိစိကွေးဆီကလည်း 1500 တောင်းတယ် ပြီးတော့နန်းမြတ်ကိုပေးတယ်……….. ဘာသဘောလည်း ……….. ဘာသဘောလည်း………….
ဒါက ညီမလေးတို့ တွေးရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘဘကြီးတို့ စဉ်းစားရမယ့်အရာတွေပါ ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘာတွေလိုအပ်နေလဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ပေးရင် အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာ လူပိန်းတွေတောင် သိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပုစွန်ဥဏှောက်တွေတော့ ဘယ်လိုစဉ်းစားမိလို့ အကုန်အကျခံပြီး လုပ်လဲဆိုတာ ဘဘကြီးတို့ကော သိကြပါရဲ့လားရှင်…………………
စိတ်မပူနဲ့တော့ ပေးဆေးကွိရေ.. နန်းလေးက ၅၂၈ပဲလိုချင်တယ်တဲ့။ ဒီတော့ဘင်္ဂလားပိုက်ဆံ ၅၂၈ပဲပေးလိုက်တော့မယ်။ ပေးဆေးကွိဆီကတောင်းထားတဲ့၁၅၀၀လဲ ပေးစရာမလိုတော့ဖူးပေါ့။
ညီမလေးတို့ရေ…. သေချာစဉ်းစားကြပါကွယ်ရို့။ တောင်းတဲ့သူနဲ့ ပေးတဲ့သူ ယူတဲ့သူ ….. ဘာလိုသဘောနဲ့တောင်းပြီး ဘာလိုချင်လို့န်ြပေးတယ်ဆိုတာကို သေသေချာချာ လေး စဉ်းစားကြပါနော်။ နောက်မှ ပြန်ပြင်နေရရင် မကောင်းဘူးနော်။
အချို့ ကတော့ ပေးဆပ်ရမှာသဘာဝပါခင်ဗျ
မြို့ တော်ကိုရန်ကုန်မှာထားရင် နောင်မကြာခင်ကာလတွေမှာ
နောက်ပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာကို
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ 
နှစ်ထောင်းအားရဂုဏ်ယူ ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါကြောင်း။
ဒီအတိုင်းသာဆိုရင် ဂျပန်နိုင်ငံကြီး ခက်လှချည်ရဲ့။
မြို့တော်ကို ဖူဂျီတောင်ထဲ ဝင်ဆောက်ရမယ်ထင်တယ်။
ကိုချစ်စရာက သရော်စာရေးတာလား၊??? တကယ်ကြီးလား
ကျွန်တော်က ဖြစ်သင့်တာနဲ့ ဖြစ်နေတာ တွေးကြည့်ခိုင်းတာပါ။ ဒီလိုမျိုး ပြောတာရေးတာ မဆလ အလွန်မှာလည်းရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘယ်သူလဲတော့မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဥယျာဉ်တည်တာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အုန်းစိမ်း ငှက်ပျောစိမ်း သုံးတဲ့ တန်းကြေးကို တွက်ပြီး စာသင်ကျောင်းဆောင်းရင်ဘယ်လောက်ရမယ်။ ဆေးရုံဆောက်ရင် ဘယ်လောက်ရမယ်။ တံတားဆောက်ရင်ဘယ်လောက် ပေါ့လေ..။ နောက်ဆုံး ရှိသမျှလူအကုန် ထမင်း ခုနှစ်ရက်လောက်ကျွေးလို့ရဆိုပဲ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဒီကိစ္စကို ပြောချင်တာထက် ညီမလေးတွေ သုံးသင့်တာထက် အဖြုန်းဘက်ရောက်နေတဲ့ ဟာလေးတွေပါထည့်ပြီး စဥိးစားတွေးဆ ကြဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်လေးက ကျွန်တော့ အတွေး သက်သက်လေးပါ။ ဒီအတိုင်းဖြစ်ရမယ်မဆိုလိုပါဘူး